Qatar ma waxay madaxda Dowladda ka caawineysaa ololaha doorashadda 2021? | Somsoon
Home WARAR Qatar ma waxay madaxda Dowladda ka caawineysaa ololaha doorashadda 2021?
Qatar ma waxay madaxda Dowladda ka caawineysaa ololaha doorashadda 2021?
SOMSOON;-Dowladda Qatar waxaa ay ka mid tahay Dowladaha carbeed ee sida fir-fircoon u taageera Dowladda Soomaaliya waxayna sidoo kale bixisaa mashaariic horumarineed oo ay ka faa’iideeystaan qar ka mid ah Dowlad goboleedyadda.
Wafdi ka socda Dowlada Qatar ayaa Khamiistii yimid magaaladda Muqdisho waxayna la kulmeen Madaxweyneyaasha maamuladda Koofur-Galbeed iyo Hirshabeele oo loo arko in ay Villa Soomaaliya u yihiin xulifo muhiim ah.
Lataliyaha Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Qatar, Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamza Assad iyo xubno ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Dowladda Qatar ayaa kulan muddo kooban qaatay la yeeshay Madaxweynayaasha Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo Maxamed Cabdi Waare.
Sida ay baahisay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed waxay dhinacyadu ka wada hadleen arrimaha horumarinta gaar ahaan sidii labadda maamul ay u heli lahaayeen maashaariicda ay bixiso Qatar.
Dowladda Qatar ayaa u muuqata in ay xiriir wanaagsan lasameyneyso maamuladda ay isu dhowyihiin Dowladda Faderalka ah, halka uusan muuqaan wax xiriir ah oo ay la sameyso maamuladda ay Dowladda dhexe siyaasadda isku hayaan ee Puntland iyo Jubbaland.
Dadka falanqeeya raadka siyaasadda ayaa tan ku micneeyay in ay Dowladda Qatar ka caawineyso Madaxda Dowladda dhexe ololaha doorashadda Sanadkan 2021.
Maashaariicda ugu waaweyn ee Dowladda Qatar ay maalgelineeyso waxaa ka mid ah Wadooyinka magaaladd Muqdisho ku xira maamuladda Koofur-Galbeed iyo Hirshabeele. Dhanka kale majiraan maashaariic muuqata oo ay Qatar ka fulineeyso Jubbaland iyo Puntland.
Boqortooyadda hodanka ah ee Khaliijka ayaa sidoo kale balanqaaday in ay maal gelineyso dhismaha Dekadda Hobyo ee maamulka Galmudug.
Xubaha ugu fir-fircoon mucaaradka siyaasadeed ee Dowladda ayaa saluug ka mujiiyay sida ay Dowladda Qatar ula shaqayneyso madaxda Dowladda waxayna ku micneeyeen in ay madaxda talada haysa ka cawineyso ololaha doorashadda.
Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame hogaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa bartiisa Facebook kusoo qoray “Qatar waxay bedeshay qorshihii hore ee ay maalmaha ugu danbeeya ay doorashooyinka dalkeena ka dhaca boorso lacag ku keeni jirtay”.
“Waxay haatan wadaa qorshe cusub, isla markaana duug ah oo ay ku doonayso in ay doorashooyinka 2020/21 ku taageerto mid ka mid ah madaxda Villa Somalia” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Madaxweyneyaashii hore ee Dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankooda waxay niyad jab ka muujiyeen taageradda ay beesha calamku bixineyso ee aysan maamul goboleedyadu u dhameyn, inkastoo aysan si gaar ah u carabaabin Dowladda Qatar.
Dowladdo carbeed ayaa sidoo kale si adag ugu oloolamaya siyaasadda Soomaaliya. Sucuudiga iyo Qatar ayaa ujeedooyin iska soo horjeeda ka leh Soomaaliya waxaana la rumeysanyahay in Madaxda talada heysa ee Soomaaliya ay aad isugu dhawyihiin Dowladda Qatar islamarka ay Qatar waxwalba ku bixineyso si ay saameyn adag ugu yeelato siyaasadda Dalka.
Article horeMaxkamadda ICJ oo u yeertay Soomaaliya iyo Kenya
Article socoda Somalia hopes to counter Al Shabaab with new education curriculum